Kurasa Chiri Mumaoko in EPUB, PDF & MOBI | Shakespir
Madzaya Madoda Dube
©2016 Madzaya Madoda Dube
Madoda Madzaya Dube asserts the moral right to be identified as the author of this book.
All Rights Reserved. No part of this publication May Be reproduced, stored in a retrieval system, printed out or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher provided its original form is maintained.
Denga rainge rakati jenen’ene, risina kana nekakore zvako sezvo yakange yave nguva yekugadzirira zvekurima, muri mumwezi waGumiguru. Miti yakange yave kutungira, yakumura zvipfeko zvitsaru ichirasa yave kupfeka zvipfeko zvitsva. Nyenze dzoimba nziyo dzepasichigare mumiti yemiunze nemipani, uye shiri iya inoudza vanhu kuti nguva yekurima yapera yakange yave kurira yechiudza vanhu ichiti, “gugugu, gugugu”.
Takanga zvino tachiti mboyo mboyo kugara muberere remba yaTana, muri mumusasa waigara vapoteri vaibva kunyika yeMozambique nekuda kwehondo yakanga yapfunya chisero munyika iyi pamusana pekumukirana kwamarudzi. Tongogararefugee camp ndooraiva zita remusasa uyu munyika yeZimbabwe, mudunhu reChipinge, pasi paMambo Musikavanhu. Panhuva iyi, musasa uyu waichengeta vapoteri vaipfuura zvuuru makumi mashanu nezviviri, kusanganisira vanhukadzi, vanhurume navana vechidiki. Tana, murume aiyambutsa vanhu mugano zviri kunze kwemutemo, achivaendesa kunyika yeJoni. Vanhu vaiita basa iri vaidaidzwa kuti, “Mahomucha”, kureva kutora vanhu. Ini pachangu Forayi ndakange ndatozvipira kuti ndisvikewo kunyika yeJoni sezvo tainge tanzwa namashoko aibvako aiti, kudzoka usina chawatenga kunyange mota chaiyo hwaive usimbe hwako. Saka ndakati kutaurirwa hunyimwa mbare dzekumusana, regai ndoozvionerawo pamhuno sefodya. Tana aive nechikwata chake chaiti; Tsemu, uyo aiva munin’ina wake, maiTanzwa uyo aiva mukadzi waaidanana naye achigara kuVhenda, kumahombe-kombe erwizi rwaLimpopo, urwo runowanika pamugano wenyika yeZimbabwe neyeJoni. Nyangwe zvazvo Tana aive nemusha wake muTongogara refugee camp umu, mai Tazwa aivada zvikuru kupfuura musha wake uyu sezvo vaviri ava vaingova tsika nditsikewo nguva dzose.
Runyerekupe rwaiti, maiTazwa vaiva nharire yamapurisa, kuvabatsira kuongorora kuti vanhu vasaita ziwada-wada muriwo wepamatongo vachidarika mugano zviri kunze kewmutemo. Zvakambotanga zvechinetsa Tana pamafambiro ake pakudarika mugano sezvo sezvo aigarosungwa namapurisa. Semunhu mupangami, akatanga kuronga zvekudanana namaiTazwa sezvo akanga atonzwa kuti ndivo vaimutadzisa kusvika Joni. Semunhu aiwana mari zhinji, hazvina kumunetsa kuti aronge rudo namaiTazwa. Mushure mekudanana kwaTana namaiTazwa, vakazotaurirana pamwe chete nekubatanidzawo Tana naShanda nemagoverane avaizoita mari kana Tana ave kudarika nechikwata chake. Izvi zvakafadzawo Shanda sezvo akatanga kuva nemasvomu mupfungwa make pane zvaaifunga izvo zvaida mari zhinji iyo yaaishaya pakushanda kwake pasina madhiri. Akabva arumbidza maiTazwa pakuva kwavo nepfungwa dzakangwara kudai. Mushure meizvi, Shanda akazosanganiswa naTsemu munin’ina waTana, pamashandiro nemagoverano avaizoita mari. Vose vakatenderana kuti basa rose iri raizoitakurwa namai Tazwa sezvo ndivo vaiva vakabata matomu munyaya iyi. Kwaivawo nezvimwe zvikwata zvakanga zvatovawo pasi patina, zvaitobhadharawo mari kuti zvione kadarika. Shanda ndiye mupurisa aidyidzana namai Tazwa achibva kumahofisi makuru emapurisa. Zvini nguva dzakanga dzati fambei kuda kusvika panguva dzegumi ari mangwanani emusi weChishanu wakare. Tichakagara muya makare, ndakaba mazwi aiti, “chiuru chimwe nemazana matatu emadhora, iyi ndiyo mari yatave nayo, kudai vose vapedza kubhadhara dai zvino tiine chuuru chimwe chine mazana matanhatu”. Nenguva isipi, ndakazoona ruoko rwemumwe nemumwe wedu rwachibata muromo kuratidza kuti tose tinyarare. “ya-a, ngatipanane nzeve hama dzadiwa, sezvo hatidi kukanganwa chatafambira nechinangwa chatiri ndicho pano”. Akadaro Tana achingotsika-tsika pose pose ari nechepamberi pemba yake iyo yataive tigere muberere mayo. Tose zvino takanga tachiti misosro tsiki-tsiki kunge vakuwasha vari kunyara vambuyawasha vavo. Tose takatenderedza misoro yedu kuti nzeve dzedu dzibate mhepo tinzwe chaizobuda muguru nembwa. Tana akarusumudzira achiti, “ini munondiziva kuti ndinonzi Tana. Vamwe vanoti tiri mahomucha, vatori kana kuti vayambutsi. Ichokwadi tisu vatori kana vayambutsi kuti muone kusvika paJoni apo. Zvisinei, nganditi muripano mose here? Kana vamwe pasina zvechida vachasvika zvavo, asi anosvika tapedza zvatichaita pano munhu iyeye anonge atosara kusvika paJoni.
“Hongu tose tiripano”, takadavira.
“Hooraiti, kana mose muri pano zvakanaka. Chiteyai nzeve dzenyu munzwe. Murume wamuri kuona uyu anonzi Tsemu, ari munin’ina wangu wandinodisa zvikuru paukama pamwe nepabasa redu iri.uyu mukadzi wamuri kuona pano uyu mudzimai wangu wandichaparadzana naye nerufu chete’
Tose takabva tati maziso edu jii kutarisa mukadzi waainongedza wacho wanei ndiye mukadzi uya wekugara kuVhenda kuna Limpopo uko.Achipedza mashoko aya takazoona ruoko rwake rwerudyi rwavekugwinha-gwnha seka tanda kaya kechirungazuva kaya kanofambisa kukunda zvimwe zvacho, isu ndokubva taziva kuti tave kuverengwa.
‘Ya-a muripo mose makakwana makumi mana, Ichi ndoo chinonzi chikwata ichi’.Akadaro Tana achibata ruoko remunin’ina wake Tsemu vachiseka zvavo, zvakakonzerawo kuti tione vende raTsemu iro raionekwa nemudzi waro pawakagurikira mazuva akabva zino rake iri.
Tana akarisimudzira achiti, zvino basa ratatarisana naro ndiro guru kupfura zvose zvataona munguva ino, mumwe nemumwe ngaabate pondo imwemumaoko ake kana madhora maviri.Mari iyi ndeye kuripa dumwa iro ramuri kuona rakachinjikwa pasuo apo.Izvozvo munenge muchipinda mumba umu, anenge apinda anosvikogara pasi dakara mose mapera.Mushure maizvozvo tozoudzanazve zvimwe. Asi chakakosha chamunofanira kuziva ndechichi,anenge adarika dumwa iri atosvika kujoni ndoosaka techinzi tinodarisa vanhu mugano.Inhema kuti chikwata change chinosungwa nemapurisa,inhema chaidzo.Vamwe ndatorota hope dzenyu usuku huno,ndaona vamwe venyu matotenga mota,zvigayo neungwanda-ngwanda yemindiyo yakasiyana-siyana’
Ndakatarisa kumusuo kuya wanike haiwa rino zimucheka rakasanganiswa zvaiti mucheka mutsvuku, Mutema nemuchena kuzouya chuma chainge chakatungirwa pariri.Nechepakati pedumwa iri paiva pakazvimba kuti tuku,uye waiti ukanyatsoriongorora waiona sekunge riri kutofema.Nekuita kwakadai ndakatanga kudyika moyo wangu zvikuru,zvekuti shiripiti iri dai rakaitwa ndisati ndabhadhara mari yangu kutaura chokwadi ndaizopoya. “Uku ndiko kufamba kwebasazve.” Akadaro Tana achipinda mumba muya mataiva aine munin’ina wake Tsemu nemudzimai wake mai Tazwa, umo mataiva zvino tachiti kwaka kunyarara, uye tati zhokoto kugara nemisana setaziya nenzara. Asati ataura zvizhinji, akamhanyira kumara iya yataiva taripira dumwa riya pamwe chete nekuchengetedza dumwa iri muhomwe yaro maraigara. Mari yakaverengwa ikakwana kuita makumi masere emadhora. “ Ndati ndimuudze mashoko akanaka aya.” Tose takasimudza misoro kuti tinzwe mashoko acho. “Ndati wakazvigadzirira here? Wakaona muporofita here kana n’anga? Kana usina ukatitadzisa kufamba zvakanaka tikasungwa tinokuita kanyama kanyama. Chokwadi tingakudya usina kubikwa shamwari. Izvi zvapera, zvino chimbofamba-fambai zvenyu muchiona nzvimbo. Nhasi tichandorara kukomboni yekwaMabhonzo sezvo pari pedo nesitesheni. Ngatiungane pano nenguva dzeshanu madeukazuva anhasi uno. Nhasi chishanu kudai, mangwana manheru tinofanira kuzorara tatodarika Limpopo. Mashoko ose maanzwa, tsangana pano nenguva dzataurwa. Munofanira kupepuka, ukapusa watosara, tinenge taenda isu vanachazezesa mutunhu unemago.” Akapedzisira achidaro Tana, tose takabuda mumba muya techimbotenderera-tenderera nemabhesi emusha uyu.
Nenguva dzamashambanzou, takanga tatoungana nechekare panzvimbo yatakanga tataurirwa nezuro wacho, apo takasvika mukomboni maMabhonzo. Takarongwa tiri muzvikwata zvevanhu gumi. Takaudzwa kuti vamwe vachamirira bhazi vari kudivi rekunobva nako bhazi, vamwe vachamirira nekunoenda bhazi. Izvozvo vanhu vari musango vakavanda sezvo kuonekwa nemapurisa zvaizokonzeresa kusungwa. Bhazi rataida rainzi “Tasvika”. Waiti ukanyatsoongorora nzira iyi, wainyatsoona kuti yaiva tamba wakachenjera kuyambuka mumvura yakavhunduka. Isu pachedu takanga tavakutotya kutizwa naTana namai Tazwa vake sezvo vakanga vasisajairike uye vakanga vasissina ukama nesu. Mari yekubhadhara bhazi taiva nayo takanzi tinozvibhadharira tega. Zvose takanga taudzwa kunyange pachiteshi takanga taudzwa kuti panonzi paChomunanga. Ini Forai ndini wevamwe vakamirira bhazi rechekudivi kwarinoenda. Nenguva isipi, bhazi rataida rakabva rati vhu kusvika, ndiro tsviriri kumira. Pakabuda bindepinde kushanda kwemasvosve pamwena wao. Zvakange zvave kutotipedzera nguva kumirira vaiburuka mubhazi iri. Chataida chete kupinda mubhazi. Hana dzedu dzakazoti saisai tachigara tave mukati. Tana akanga atogara nechekare nemukadzi wake mai Tazwa. Kutaura chokwadi, nzira iyi yaida manyatera kuti usvike.
Bhazi redu rakabva raruma mugwagwa kubva paMabhonzo bus stop, apo painyanyo zivikanwa nemazita anoti Nyautsa river kana kuti pagame.Kumhanya kwebhazi ndinokuziva iri rakange rooita zvekuuruka. PaChecheche hatina kunyanyomirapo rakamira parengi ndokuburutsa vaiburuka nekukwidza vaikwira.Rakasimuka zvakare, bhazi redu ndokutangazve kufemba hwema hwemugwagwa.Pandakadaa kutsafunga nekurangarira nezverwendo urwu ndakashamisika zvikuru bhazi rave kutopinda murengi yeChiredzi. Tose takamboburuka techimbofurwa zvedu nemhepo. Mutyairi akapinda mubhazi ndokugara pachigaro chake ndokuridza huta achitidana. Takamhanyira mubhazi redu tose. Bhazi rakapinda munzira yaro ndiro iro paTriangle. Hero dari rakananga kuNgundu zvekuti munguva duku-duku takanga tatomira paNgundu. Tichibva ipapo, takaona chikwangwari chakanyorwa kuti, 100km Bubi River. Kubva paNgundu apa, takagara mubhazi tagarazve. Rwendo rwacho ruchinge rwairebawo ruchienda mberi. Zvino bhazi redu rakanga ratomira paElephant Hotel iri paBupi River. Hatina kunyanya kupedza nguva paBupi River apa, bhazi redu rakabva rapinda munzira roenderera mberi nerwendo rwaro. Hana yangu zvino yakanga yave chigayo kurova pakasimuka bhazi redu paBupi. Mutyairi webhazi redu akanga akwidza mupurisa kumberi kwebhazi kwaaiva iye. Takashaya kuziva kuti mupirisa uyu aive hama yake here kana kuti pane chaaida. Ini ndakati nechemumoyo, “patichaburukira ndipo apo tichasungwa”. Idzi ndidzo dzakava pfungwa dzangu kwenguva refu bhazi richifamba. Ndakaongorora vanhu vose vechikwata change vakanga zvino vachiti kwaka kunyarara. Kutaura chokwadi, Tana akanga ave Shumba yedu. Chokwadi waiti ukasanganidza maziso ake neako waidemba kuti zvaitikirei.
Kunyange zvazvo Tana aityisa kudai, kutaura chokwadi Tana aiva murume akarurwa zvakanaka parunako. Akanga ari mupfupi zvakafanira, aine muviri wakafanira vanhurume vose vakasikwa zvakanaka. Ari mutsvuku zviri pakati nepakati. Bvudzi rake rakati ndoo kuzvibira. Makumbo ake akanyatsotwasanudzwa nenyoka yakamuumba mudumbu raamai vake. Chiso chake chakanyatsokakwa zvakaringana zvekuti zvaitomurambira kuti aunyanise pauso pake paye paanenge achida kuti atyiwe nesu. Chiso chake waiti sei munhukadzi uyu chipfuwa chake chisina mazamu. Murume uyu akanga akarurwa zvake. Maziso ake aienda-enda ari machena akangwara nemboni nhema pakati. Kumahombe-kombe kwawo kuchibuda ziso jena. Waiti ukamucherechedza waiti zvino kutyisa kwake kunombobvepi. Kuvetemesa kwaiita mutyairi kwake bhazi kwakaitawo kuti nenguva isipi bhazi redu ribve rasvika pachiteshi chedu cheChomunanga.
Tana ndiye akava munhu wekutanga kuburuka mubhazi paChomunga. Akabva ati nzvee pote necheseri kwebhazi, niye uyo dari ave seri kwemugwagwa, hezvo iota seakananga kumavirira, ndiye dari mugwagwa zvakare aching odzokera. Ipapo akanga atove chinhambwe napakamira bhazi rataiburuka. Zvino akanga atofamba chinhambwe chirefu chaikwana maminetsi mashanu, hoyo dari njanji yechitima seakananga chamhembe kwakadziva kumaodzanyemba. Takada kutarisa kuti topinda nepi uye ndekupi nekupi kwatingafamba nako. Takaona pasina kunze kwekutevera mai Tazwa. Mai Tazwa vakatungamirira furere revanhu dungwe kuti rongondo. Nguva zvino dzakanga dzonanaira kushanu nechidimbu, zuva ratonyura muuma hwamavirira asi kunze kwaiva kuchakachena zvako.
Panguva iyi kuti tifambe zvakanaka nguva dzenhatu dzaifanira kuti dzisvike. Techingoti fambe-fambe, takanzwa kurira kwedzangaradzimu rairira kambo kaipisa panguva iyoyo kainzi “Ndomutora”. Mai Tazwa vakamira ndokusimudza ruoko zvairatidza kuti tinofanira kuvanda. Tose takavanda. Raingovawo zvaro zita rekuti kuvanda sezvo tainge takaita semapudzi akafirwa nemamai awo panguva yemashanga.Taingova utitinini titinini pasi pezvikwenzi izvo zvine zita rekuti minanga,ndoosaka nzvimbo iyi yechenzi Chomunanga.Kudai musi uyu pakasvika mbeveve ndiwo musi wayaitanga kutaura,nekuda kwekuona manana akadai.Munhu uya akabva apfuura zvake nedzimudzangara yake yechidandauka kurira
Haana kana kumboona zvake kuti chii chaitora nzvimbo panzvimbo iyi.Tose takasimuka panzvimbo iyi, zvino nguva dzakanga dzadarika panguva dzetanhatu, zvakanga zvave nyore kufamba sezvo zuva rakanga ratomedzwa kumavirira nechekare. Mai Tazwa vakabva varuma gwanzi zvakatinzwisa kufunga zvizhinji sezvo mukadzi uyu akange iota zvekuuruka kufamba kwacho mufunge.
Takafamba tikabuda chifunhi, rwendo rwacho rwainge rwakareba zvenyu.Tati fambe-fambe takabva tasangana nemumwe murume ,zvavakataurirana namaiTazwa hatina kuzvinzwa,asi takanzwa kuti vakatemana nerurimi rwechivhenda.Paibuda mazwi aiva nehasha zvaibva zvanyanyisawo kutityisa kana tootarisa ushingi hwaiva namaiTazwa.Takapfuurira nerwendo rwedu ndokusvika pachibhorani.Tose takambonzi timbonwa mvura .Tapedza kunwa mvura takasimudzira rwendo rwedu,Tana kana kumbonzwa nezvake kunyange munhuwi wake zvawo .Takafamba tafambazve rwendo rwacho rairwadza kuzoti zvino tachiti rukutu kuneta takabva tati vhuu kusvika pane mumwe musha. Takagariswa nechekunotangira chivanze chemusha uyu, uko kwaisvika zvishoma chadzera chechiedza kubva pamoto waiva padare remusha uyu, apo paioneka varume vanenge vaive vatatu. Tose takati pasi njaa kugara. Ndakaba mazwi avanhu vaitaura pamusha uyu, nechekure-kure kwepfungwa dzangu ndakanzwa inzwi raTana rechiti, “Haiwa tafamba zvedu zvakanaka, asi zvada kumboti netsei apo tachangobva paChomunanga sezvo kunze kwanga kuchakachena.” Vakadaira mai Tazwa. Tana akabva auya kwataiva ndokuti, “ndizvo zvinoita nzira iyoyi varume, haina zvayo kunyanya kuoma, asi ndinoti musaore zvenyu moyo hakuna anoenda paZudhu Africa naTana akatadza kusvika. Manyepo chaiwo.” Akadaro Tana achimira-mira pamberi pedu izvo zvaiwedzera shungu dzedu. Takanzi timbotura mafemo. Zvakabuda pachena kuti musha uyu waive wehama dzamai Tazwa sezvo pakange pave kunhuhwa chivhenda chega-chega. Tana namai Tazwa vakapiwa sadza vakadya zvavo, isu vana sakuwana mungaripiwa nani. Takanga tatopinda muzuva repiri kushaya sadza kwedu kana tichireva masikati nemanheru. Takagara kanguva kaiverengeka ndokubva tapinda munzira yedu, zvino pamwe chete naTana. Takasvika kumucheto kwenyika yevhenda kunova ndiko kwaigara mai Tazwa. Takaiswa munekamwe kamukova kana kuti kagwenga kaiva kasina mvura, zvikachinzi naTana, “mumwe namumwe ngaatsvage pekurara imo muno mugwenga”. Takarara musango imomo, Tana namai Tazwa vakaenda kumba kwavo sezvo takanga tatova kwavo. Kutaura chokwadi, hapana kana ani zvake aizotsunga kubvunza Tana kuti zvamava kutisiyawo musango muno? Zvino pakange pave pakati pehusiku, nyangwe zvazvo taiva tisingakwanisi kukwenya machisi kuti tione zviringaruva kuti tione nguva nekutya kuzviratidza kumhandu dzedu, asi denga pacharo raitaura sezvo gwara renzou rakanga ratochinjika, ukuwo nyamasase, utonga wakanga atotungawo nyika nechekumabvazuva. Kutaura chokwadi kunze kwakati ganan’anwa kuedza takasvinura. Pfungwa dzedu tose dzakagayana asi hapana aikwanisa kubvunza mumwe sezvo taitya kutengesana kuna Tana. “Zvino zvakwachiyedza, tochidini manje?” Idzi ndidzo dzaiva pfungwa dzemumwe nemumwe wedu.
Utonga hwakanga hwatotsuka kumabvazuva. Dzainge dzave nguva dziya dzinoshamba nzou. Takanzwa izwi raiti, “e-ee mukai! Mukai! Nditeverei, asara hameno zvake, vakachenjera toenda”. Akadaro Tana nezwi raityisa. Pakabuda chipata-pata kushanda kweunheza paye paunotutira zvekudya zvawo mumatura apo mwaka wekunaya kwemvura wooswedera. Ari ani wacho aida kusara mukati mezienda-nakuenda wesango munyika yausingazivi. Tose takabva tati kwanyanu kusimuka, tisu mudungwe dzvi kutevera Tana. Akaenda nesu panzimbo yakati kwirirei ine zvikomo uye izere miti yerudzi rwemiuyu. Takaudzwa kuti taizogara muzvikomo izvi kwezuva iri chete, kwozoti rechimangwana racho nenguva dzemanheru taizodarika waya kana kuti mugano kuti tione kusvika panyika yepaJoni. Zuva iri wakanga uri musi wemugobera, saka taizodarika mugano ari manheru emusi wesondo. “Kana mukaita mutsindo kana ruzha hameno zvenyu. Kumavirira kwamaiona kujeka magetsi usiku ndiko kumugano, zvakare ndiko kukamba huru yemapurisa. Kunyangwe muno matiri hamuna kuchipa munotodawo tamba wakachenjera. Saka munofanira kuzvichengeta sezvo muchasara muri mega kuno kusango. Zvisinei hazvo ndichapota ndechiuya kuno kuzoona kuti mugere sei, zvakare munin’ina wangu Tsemu achauya nhasi mangwanani ano, kana asvika tichauya tose techizoronga zvimwe zvezvirongwa zvichada kurongwa “Akadaro Tana, achibva ati pote necheseri kwemiuyu yyaivepo pasina shoko, ipapo hana yangu yakabva yati bha kurova.Zvino nguva dzakanga dzonanaira panguva dzegumi neimwe zuva rekare takazoona Tana nemunin’ina wake Tsemu ndivo pfacha kusvika, tose takaunganidzwa ndokuudzwa mashoko aya
‘Kuno kwatiri nhasi uno ndiko kunonzi kuVhenda, saka musatya zvenyu hakuna chinoitika, ndosaka makaona ndisina kufamba pamwe chete nemi, ndakasara Mutongogara chinangwa chiri chekuda kutsvaga kuti kufamba kwamakaita nezuro mungadai makaonekwa nevaoni zvikadaro muchitotsvagwa saka haiwa kwese kwandabva nako kuri ikowokwamakabva nezuro nezuro nganditi musatya kwakanaka’.
Akadaro Tsemu amire pamberi pedu nemukoma wake Tana. Akaenderera mberi achiti, ‘e-e shoko rinoti, mumwe nemumwe wenyu anofanira kubvisa mari yaainayo achiikanda pakati pedariro apa.Yose mari yemuno muZimbabwe inofanira kusara munyika mayo. Asi zivai kuti mari iyi hatidi kuidya isisu vakuru venyu kwete, ndimi muchaidya.’Akadaro Tsemu. Tana akatanga kukosora-kosora achifamba-famba pamberi pedu, ndokumbokwenya machisi obatisa mudzanga wake ndokufuridzira utsi hwacho mudenga wechibva wati mudenga togo. Akaedza kuunyanisa chisa chake zviya zvekuti chibude migero-migero asi zvakaramba nekuti ganda rake repachiso rakanga rakakakwa zvakafanira. “Shoko matorinzwa; pano ndipo panonzi pasarungano. Tose ngatibvise mari dzatinadzo anenge aramba akakonzera kuti tisungwe tozotadza kusvika paJoni, chokwadi ndinoti hokoyo nesu. Ungavei panyama yehuku iwe. Varume itai tione, bvisai bvisai; zuva riri kuenda machinda kuLithumba kure uko kunova ndiko chete kunooneka upfu.” Uyu ndiTana aitaura. Mari dzakabuda zvekubuda zviya hama woye. Hakuna kana ani zvake akasara aine kobiri zvaro muhomwe make. Nekuda kweizvi, pfungwa dzangu dzakabva dzatenderera dzikafunga kuti, “uku hakuzi kutiza jeri takananga kukamba here?” Mari yose yaverengwa, yakaita zana ramadhora. “Ya-aa, mari iyi tichatenga chigodhi chikuru cheufu kana kuti 50kg, nembudzi imwe yekuitisa muriwo. Ndiri kutoona kuti vamwe nzara yatomufena. Musati handisi kuzviziva kwete, ndiri kuzviziva kudarika imi. Masikati ano murikushaya sadza kwetatu. Hapachina kana kambuva zvako. Ndizvozvo toonana gare gare. Ndichambonotarira munhu wandichatuma kuLithumba township uko kunotenga ufu.” Akadaro Tano. Aitotaura zvake zvinorwadza sorugare akatodhakiwa zvake netototo yaaimwa kwamai Tazwa uko kusaidanwa aizwa. Kutaura chokwadi varume ava vainakidzwa neupenyu. Vaisasana zvavo pamadiro zvokuti hapana akanga asina mudiwa wake kana kuti shamwarikadzi yake. Doro raimedzwa zvimedzo zvichisara zvoopisa. Isu varombo takanga tava nhapwa mukati medondo. Hapana aikwanisa kusimudza musoro kuti tizive kuti chii chaitora nzvimbo. Zvose zvainge zvakatiomera. Waingofa uri mombe inorimiswa ichirohwa inyerere. Nzara yakanga yave kutidya ura mudumbu. Ura hwakanga hwabatana nemusana, maziso akanga agara mumakomba, zvoso zvedu zvootanga kubuda makona. Hapana akanga achakwanisa kugara kunze kwekuti nemanhede gaa kurara takatarisa mudenga. Zvesinei hazvo, zuva rakapinda muna mai varo, tikarara nayo nzara. Tana naTsemu Havana kuzodzokera kwataiva pazuva iri. Dzimwe pfungwa dzaiti kubika sadza nembudzi hazvisi nyore. Zvichida vachauya, izvo kwete. Waiti ukada kurara nemanhede, zvoramba. Ukada kurara nedivi zvoramba. Kuti ugare zvoita kunge wakagara ngemuswe chaiwo. Takabva zvedu tagutsikana kuti chekupa imbwa hapana sezvo tenzi vakanga vatorariawo mutakura.
Usiku uhwu hwakave gore chairo. Hope kuti dzibate kunge dumbu rizere uye chigayo chemudumbu chichigaya chikafu kwete chichigaya ura chete. Ini zvakandikanga mate mukanwa ndikashaya hope, uye ndakatadza kufunga. Kunyange muzukuru wangu wandaida zvikuru Zekia ndakatya kumubvunza kuti zvichamira sei zvatiri kuona izvi. Zvose izvi zvaingova zvemeso muromo zvinyarare. Ndakazvibvunza ndega nechemukati-kati mehwendefa yemoyo wangu ndechiti, “ndinodei chaizo-izvokwandiri kuenda uko? Ndinosvikopihwa basa here? Ndisina kuritsvaga chokwadi? Iriko here mombe inofurira irere? Kwete izvi hazvifi zvakaitika? Kana zvechinzi Mahomucha anosvikotipa basa, ivo vanenge variwanepi? Ndeapi makambani anobvuma kutipa basa isu tapinda munyika umu zviri kunze kwemutemo, uye tsamba dzekuzvarwa nezvitupa hatina. Kunze kweizvi, hatigoni kutaura mitauro yekunyika yatiri kunopinda yaisanganisira chiTswana, chiZulu, chiPeri, chiShngani, chiVhenda, chiBhunu nemimwe yakadaro.
Ndiri mupfungwa idzi kunze kwakabva kwati kuchekuche kuedza ndakasvinura.Kuzoti mangwanani runhuriri, Tsemu,Tana nemukadzi wake mai Tazwa vakabva vasvika kuzvikomo kwataive kuye,hapana kana nemumwe wedu akakwanisa kusimudza musoro kuona kana kunzwa kuti kwakanaka here.Zvinhu zvakanga zvaita manyama amire nerongo,hapana akanga achina kamari zvako,kana sendi zvaro muhomwe.Nyangwe zvazvo waifunga kutiza,bhazi racho waizorikwirisa nei kusvika Chipinge kure kwakadaro.
Tichateya nzeve kuti tinzwe matama avo takazonzwa izwi raiti, “takazokundikana nezuro kuti muone chikafu. Zvisinei, manjemanje sadza riri kuuya. Tatosiya rave kutoibva. Ndati ndimuudze zvanhasi kuti, muzive mamirire ekunze sezvo zvirongwa zveupenyu zvakafanana namamiriro ekunze. Mumwe musi denga rinofuma rakati ngwee kuchena, rimwe zuwa denga rinofuma rakati fundumwa kutsamwa. Nhasi sondo kudai, nyangwe zvime sei, tinodarika mugano. Nyangwe zviome sei, nhasi tinodarika sei.” Akadaro tana achibva aenderera mberi achiti, “tichasimuka pano nenguva dzeshanu madeukazuva anhasi. Tichafamba zvedu zvishoma nezvishoma kuitira kuti tisvike munaLimpopo kunze kwooti zvarara kusviba. Vakatora nguva refu tinavo. Kuzoti zuva ronanaira kurova nhongonya, ndookudzokera vachibva vauya nekasadza kwete sadza. Zvakatishamisa mbudzi yose ikwane muhadyana panzimbo yekuti ibikirwe mugate. Takaunganidzwa tose pamwe zvisina rugare mukati, ndikupiwa kasadza kaye tiri muzvikwata zvevanhu vana. Tisu kasadza kaya nambu nambu tsvai kupedza. Izvi zvaireva kuti mbudzi yese nesagi rehupfu zvaizosara kwamai Tazwa, vachisara zvavo vachipfachura nyama nesadza varere nemusana. Hapana kana ani zvake aikwanisa kubvunza kuti upfu hwaendepi, mbudzi yose, nyama yacho maipa ani? Zvapera zvekudya, pakarongwa gadziriro yekusimuka kwedu. Zvakanzi timboimba kambo, tozoita kamunamato kapfupi kari kekukumbira nyadenga kuti atizarurire gwanzi. Ini Forai ndini ndakaimba kambo kacho ndiri ndega sezvo vamwe vangu vainge vasingakazivi. Ndakaimba kambo kaigarondishanyira ndiri munguva dzakaoma kudai. Kambo kacho kaiti;
Mwari baba, tioneiwo
Nzira yatiri ino
Tayaura baba tayaura
Pakapera kambo aka, Tana akakwidza munamato achiti;
“Mwari baba ndimi
Makasika denga nenyika
Nezvose zviri panyika
Munoziva zita renyenyedzi
Imwe neimwe iri mudenga
Panzira yedu iyi
Yatatarisana nayo. Aaamen.”
Munamato uchinginzi gwishu kupera, Tana akabva atungamira dungwe ravanhu. Takaudzwa kuti hapana munhu aifanira kukosora, kundozvibatsira, kurasa mvura, kuita mutsindo kana ruzha. Zvakanzi paunofamba ngapaite sepanofamba kiti isina mutsindo ndoosaka ichizobata gonzo. Panguva iyi, mai Tazwa vakange vatodzokera kumba kwavo. Tana nemunin’ina wake Tsemu ndivo vatainga tiinavo.
Takasvika mumatama erwizi Limpopo kunze kwave kuti zvarara kusviba. Maziso akanga singachaoni zvirikure. Takaona kuti zire zire mumahombekombe erwizi, Tana ndokuti tose timire. Takamira tose takati mwiro kunyarara pasina kana ani zvake aipfakanyika. Kunyange kuti ukwenye paivava zvairamba zvekuti dai zvaibvira kubata mweya yaitofema taizoibata kuti tirege kuzikwa kuti pane vanhu tipunyuke mukusungwa namapurisa.
Tana naTsemu vakaongorora zvakasimba ndokuona kuti vaiva vanhu rume vaviri vaidawo kudarika muganu weJoni. Takadzika murwizi chinyararire, kunze kwekunzwa mweya chete yataifema. Mvura yakanga yaoma kwangosara zvimakandwa kandwa chete. Rwizi rwose ruchingova jecha chete chete. Tose takanzi timbokapa mvura, zviya zvekuchera mvura nemaoko uchiisa mukanwa. Takapedza zvekunwa mvura, tose takaitwa mudungwe semabviro atanga taita. Tsemu ndiye akatungamira gurumwandira redu iri Tana ari mumashure medu. Imiwoye, chomusi uyu chaive chisionekwi kutamba mudzimu kwembeva. Zvanzi mujecha hamumhanyike, manyepo chaiwo. Kunge zvinhu zvichakanaka. Tsemu akamhanya sedindingwe, isu tichitevera mumashure uyuwo Tana ari mumashure medu. Zvaiti anenge awa obhutsurwa kumagaro nenjombo chiripo-ripo zvichinzi muka. Rwizi Limpopo rwakafara veduwe, asi hapana akazviona. Takaziti sai-sai tave seri kwerwizi. Sai-sai wacho wepi, Tana naTsemu vakatanga kumuka chimbwamupengo chaicho hama ndimuudze.
Techibuda murwizi taipinda mumugwagwa weJoni apo takatarisana newaya yakakombera nyika iyi ine magetsi kana kuti moto unopisa nekugwinha chirirpo-ripo. Imo muwaya macho muzere chikwenga chinobaya samari, ukuwo waya dzacho dzakakombera nyika iyi dziri mbiri. Tsemu akasimudza waya, isu tichipinda nepasi payo. Izvi zvaiitwa mushure mekunzwa kuti waya iyi haina magetsi panguva iyoyo. Zvaiti vamwe vaipinda nepasimudzwa, vamwe vachiita zvekukwira nepamusoro payo. Anenge anonoka kupinda kana kukwira, aibhutsurwa nenjombo masinyani achiwira kwakadaro uko, chiripo-ripo achimuka machewe. Waibva waona kuti chokwadi chokwadi kusina mai hakuendwi. Waida kuchemera ani wakatove nhapwa kare.Kuzoti tachiti seri kwewaya dzose jata tisu zii takadaro setafenda takarara nematumbu.Nenguva isipi Tana akabva ateva nzeve dzake kumativi ose emugwagwa kunzwa kuti kungangodaro kuchiuya mota dzemapurisa nemasoja,tikaigochera pautsi.Mativi ose ainge akati mwii kunyarara ,zvikachinzi naTana nezwi rainge remurwere arwarisa,handei varume woye,akadaro Tana.
Hama woye ini ndakademba chandakaitirwa munhurume panyika pano,takatanga kupinda mumaguturudzi nemumajaraunga muzienda-nakuenda wesango mukati merima munyika yausingazivi.Iyo nyika izere mhuka dzesango madzino chengetwa idzo dzinorura.Tiri murima imomo taifamba setakatarisa kuchamhembe kwakadziva kumadokero,tati fambe zvishoma takamboti mire.Pasina nguva taka
Rusimudzira zvakare,takafamba murima gobvu iro raikaro chekeka nebanga.Panguva iyi mwedzi wakanga wavamutete,waizotobuda kwoedza.Kushanduka kwedenga nekubuda nekupota kwenyeredzi ndiko kwaitotiratidza kuti kunze kuri kufamba.Takazoti zvino tafamba kwenguva refu taunduka tanzwa,takabva tasvika pane mumwe mugwagwa unonzi Chipise.Mugwagwa uyu wakanga usina tara,waibva nechekumavirira wechiita kunge wakachinjka mabvzzuva wakada kutarisa kuchamhembe.
Patakati,tititi kupinda mumugwagwa uyuTana akabva ati, ‘ye-eee varume,tinenge tiri kurasika,ndinoona pakati pedu panofanira kunge pane munhu ane anedhimoni rakaipisisa.Hatisati tambofamba mufambiro wakadai,handizvo here mwana wababa? “akadaro Tana achibvunza munin’ina wake Tsemu.
‘Ichokwadi mukoma nzira yedu ino izere nemweya yakaipa,ndinoona kuti pane munhu ane mweya weurombe pakatipevanhu ava.’akapindura Tsemu. ‘Manje isu vanaTana azvitinesi,kana kunze kwaedza tichakanda hakata,n ‘anga tinayo pano nemuporofita zvakare aripano,asi annge abatwa tinomurova zvakaipisisa tosiya tamuzvambaradza musango muno.Hatingatadzi kusvika pajoni nekuda kwemunhu anemadhimoni ake,kwete ndaramba ini!’akadaro Tana azadzwa nehasha.
Tose takati nazvo kaha,tisu kwaka kunyarara.Takapinda mumugwagwa uyu ndokufamba takatarisa kumavirirakunge tatarisa kudhorobha rekutanga rejoin kana uchibva kuZimbabwe rinonzi Messina,takafamba nemugwagwa uyu kwenguva yakati-kuti,ndokubva tazoona chiedzamberi kwedu,iyi imota yaibva mber kwedu.Payakada kuti maziso ayo asangane nesu apo paive pakurumana mugwagwa mota iya ndokubva yati hutu kudarika.Takasimuka tose ndokuruma rwendo rwedu urwu zvakare,zuva ndokubuda tiri munharaunda yeMessina mufunge.Ndakatambudzika zvikuru ndikati,sei vanaTana vatisvitsa panzvimbo yakadai?.Ini nemuzukuru wangu Zekia takavanda pasi pezimuuyu iro raiva rakatandaridzwa-tandaridzwa nemitsunda kana kuti mipombera iyo yainge yakasungana-sungana kubvira muberere maro kusvikira kumusoro kwaro.
Vamwe vedu vakandovandavo mune zvimwe zvikwenzi zvakasiyana-siyana.Takavanda kudaro taiona rukisheni rweMessina ruri pedyo pedyo,vanhu raingova besanwa vaikwirwa vaidzika asi vose hapana akambotiona.Mumwe murume akauya pataiva takavanda chaipo achitsvaga chikwenzi chekuti azvibatsire ndokuzvibatsira achibva atoenda zvake.Takagara takangodaro tichimirira vanaTana kutitinzwe ndivo vooti heyo yarira.
Zvazvaidai navanaTana zvaitovadyawo moyo kuti tichabuda sei panzvimbo ino.Pakapera nguva refu kuti tione mukana wekubva panzvimbo iyi,zuva rakazobuda tavapo asi nguva dzepfumbamwe dzakasvika techingovapo.Tana naTsemu zvakavatorera nguva refu kuti vaone mukana wekutibvisa panzvimbo iyi.Kutaura chokwadi hama woye tose takanga torwadziwa sezvo hapana akanga amborara usiku hwose,uye kwataienda kwacho kwaizotova kutenda maruva tadya muchero wacho,tose takanga tiine mafungiro mamwe chete.
Zuva rakanga rati paka kukwira,vanhu,vazhniji vakanga vava kumabasa kwavo,takakwanisa kubviswa panzvimbo iyi ndokundovandiswa pane kamwe kakwenga,takafuratira musha mukuru weMessina.Nyaya yekurasika kana kutadza kufamba zvakanaka kwaTana naTsemu yakabva yatanga.
‘Ini nemuni’ina wangu uyu Tsemu,hatisi vatsva mubasa redu iri rekuyambutsa vanhu mugano. Inzwai ndinyatsomuudza kunyange zvinoreva mazita edu aya. Tsemu zvinoreva kutsemura masango tichienda Joni. Tana izwi rechiChangani rinoreva kuti uya tiende; pachiShona richireva kuramba. Hongu tinoramba zvakare kurasika sezvizvi. Zvino tiri kuda kuona kuti dhimoni iri rinani pakati penyu. Tarisai muone patiri pano pakaipa zvikuru. Chii chatitadzisa kuti tifambe mufambiro wedu chaiwo semazuva ose? Babamuninin Tsemu, tiri kufamba Joni rino kwave kwechingani zviya? Ndinoreva techidaritsa vanhu mugano sezvizvi. Uyu ndiTana aibvunza munin’na wake.
“Nhasi uno tiri kudarisa vanhu mugano kwemakumi matatu. Akadaro Tsemu.
“Chakwadi hatisiri vatsva panzira ino. Izvi hatisati tambozviona izvi.” Akadaro Tsemu.
Chiso chake chakange chisisajaereki zvino, achiita sokunge ari kutsenga mazino ake. Tose zvino takanga tachiti mwiro kunyarara sezvo murume uyu taimutya zvikuru kubva kwese kwatakanga tabva naye. N’anga yakabudisa hakata dzayo ndokuwaridza kamucheka katsvuku nechepamberi payo ichibva yadurura hakata dzayo pamusoro pechimucheka chiya.
“Ya-a, mumwe nemumwe wenyu ngaataure zita rake rechibvunzirwa kuti handiro here ratitadzisa kufamba zvakanaka”. Yakadaro n’anga iya. Takataura mazita edu mumwe nemumwe wedu. Kuzoti pane mumwe mukomana zvikachinzi, “ya-a iwe mukomana ndiudze mweya wengozi unotenderera-tenderera mudzinza rekwako. Ndiudze zimaiguru rekwako rinoshanja rechishandisa mweya uyu pauri iwe? Ndiwo nhasi uri kutitadzisa kufamba zvakanaka. Watodzimaidza vakuru vedu ava kuti vatadze kuziva kunyange nepavakambofamba napo. Votoita sevatsva panzira ino”. Yakadaro n’nga iyi isisajairiki. Yakanga yatofinyamisa chiso chayo chatobuda migero-migero pahuma payo. Mukomana uyu haana kana kumbodaira zvake kana kumboti zvake bufu. Nanhasi uno, hapana akaziva chokwadi pazviri. “Saka toita sei kuti tifambe zvakanaka?” Akabvunza Tana kune n’anga iya.
“Ndichaisa mushonga mumvura, ndoisamo peni ndozvisanganisa ndokushira vanhu vose. Ndapedza izvi imiwo vakuru vedu muchagwadama mombozivisawo vadzimu venyu kuti vatibatisre sezvo ndivo vamunotungamirirwa navo kuti muite basa guru rakadai iri.” Yakadaro n’anga.
Chinzwaika babamunini, toitasei nemharadzi yakadai?” Akabvunza Tana. Mharadzi iyi inofanira kuzvambaradzwa kurohwa zvikuru muno musango zvekuti dai tazvinzwa tichiri kumugwagwa weChipise uya, kuya kwatambovanda mota deno tarisiyako radyiwa neshumba. Akadaro Tsemu.
‘Twaaa-a!’Tose takati pasi kwati techitora nzvimbo dzekuvanda,sezvo takanzwa kunge kurira kwepfuti dzemapurisa,nechomumoyo mangu ndakati tatosungwa,izvo imbama yakarohwa mukomana uya naTana.Tsemu akabata mukomawake achiti onai tiripedyo nevanhu tinozviparira tikasungwa pano,ngatichitoronga kuti tosimuka sei pano.
Nguva dzose kubva pakatanga rwendo rwedu muTongogara,Tana taingomutya zvedu pasina zvatakamboona pakutsamwa kwake,apa akatsamwa zvekuti mweya wake waakanga ave kufema ndiwo waizotisungisa neruzha rwawo.Zvapera izvi Tana akazoserera zvake,kukachizotanga nyaya yekupira midzimu yavo.Akatanga achiti, ‘mijimu yangu,tili mugwanja gulu heli nemabongahaya,tipelekejei imwimwi anategulu vangu,ane mabvuli mandede haya ndinzwenyi vajimu vangu ndapeja hangu’.Uyu ndiTana aikumbira vadzimu vake pamwe nekutka vanhu vacho vaaida kuti vadzimu vake vamubatsire.
Zvapera izvi tose takanzi hande pasina nharo,takasimuka ndokupinda murwendo rwedu nepakati chaipo pesango.Takasimuka takananga ivi rekuchamhembe tiri –nechekumabvazuva kwemugwagwa mukuru unobva kuMessina uchienda Louis prichards, ndiwo zvakare unopfura nemuPetersburg uchienda Pritoria.Takafamba nemunzvimbo inochengeterwa mhuka,yaiva nzvimbo yakavakwa zvaikatyamadza zvikuru,zvaiti tikasvika pane waya taikwira towira mukati mayo,taiti tofamba tosvika pane imwe waya yakaganhura yatabva nayo.Izvi zvaireva kuti maitirwo ewaya iyi yaigamira matanga emhuka kana kuti,mapaddock.Waya yacho yainge yakareba mufunge,zvekuti yaigona kusvika mamita 8 kana kudarika.Chokwadi waya iyi yakanga yakarukwa zviya zvekutsimanhiswa zviya.Hapana kana chii zvacho chaikwanisa kupinda.
Munzvimbo iyi ndimo mandakatanga kuona mhuka iya inonzi uriramudenga kana kuti twiza,nedzimwewo mhuka dzakaita senhoro,mbizi nedzimwe.Munzvimbo iyi taifanira kunge takasungwa asi hatina kunyange kuona munhu upi zvake.Dakara takabuda mumatanga emhuka aya pasina watakasangana naye,hameno kuti mapurisa ematanga aya aivepi.
Takafamba tafambazve ndokuzosvika parwizi urwo rwaingova jecha chete rusina kana kadonhwe zvako kemvura,Tana akaitiraira kuti tichere fuku kuti tione mvura yekumwa.Takachera tikabata mvura,tese tikanwa mvura iyi.Chakandishamisa zvikuru ndechemunhuwi waiva nemvura iyi,yaiva nemunhuwi wandisati ndakambonzwa muupenyu zvekuti kubva zuva randakanwa mvura iyi nanhasi uno ndichiri kuunzwa.Zuva rakanga roogara makomo kumavirira,nguva dzakanga dzoonanaira kunguva dzeshanu manheru.Takanzi timbovanda kuti kunze kunyatsodoka,zvisinei kunze kwakadka.Takasimuka ndokusvika pamugwagwa mukuru ndokumbogariswa pasi pebhiriji.Nenguva isipi takayambuka mugwagwa uyu takatarisana nemba yemumwe murungu iyo yaivanechokumavirira kwemugwagwa uya,ndiwo zvakare mugwagwa uya watambotaura nezvawo paye tiri kumatanga emhuka.Takanzwa mutsindo wemhuka yainge yaiuya kwataiva murima raingerakati ndo kusviba,takawira pasi muuswa ndakasimudza maziso angu wanei hei,nderino zimurabada rebhunu rino zirefu hofori chaiyo.Bhunu iri rakadarika panzvimbo yataiva iyi harina kutomboona kuti kunze kuno kunei.Rakadarika tose tikasimuka takananga kuzvikomo zvaiva necheruseri rwemugwagwa uyu kuri kmavirira ikoko kwakare.Takavandiswa techiitwa vanavana,tikaudzwa kuti hatifaniri kuonekwa kunyange neshiri zvayo kubva manheru emumvuro aya kusvika manheru amangwana wacho musi wechipiri paizouya kombi kuzotitakura.Vose vari vaviri Tana naTsemu vakakwira kombi kuenda Pretoria kwavaizondohaya kombi yaizotitakura.Ndakabva ndati nechomumoyo mangu,zvovootisiya tiri tega ivo varivo vanoziva mavandiro acho,takasiiwa tiri nherera mukati mesango umu wechida kana usingadi.
Musi wechipiri,iri ndiro zuva rataizotakurwa nekombi ndivanaTana,ndirowo zvakare zuva rakaenda mapurisa kuVhenda kunoonana namaiTazwa kuti basa riri kufamba sei ikoko senharire yemapurisa kumugano.Sezvo maiTazwa ndivo vaishanda nemapurisa ekukamba yeMasodzi.Vakuru vakuru vekamba yemasodzi vaivimba naShanda zvikuru pabasa rake rechipurisa iri,kwese kwaaienda nebasa hapana aimutevera mumashure nekuti vaimugonda.
Shanda,sezita remupurisa uyu, akasvika kwaRuth, sezvo ndiro raiva zita ramai Tazwa. Kutaura chokwadi vaviri ava vanoti Shanda naRuth vakanga vapindwawo neuori zvikuru. Vakakwazisana zvavo zvakanaka ndokubvunzana upenyu. Shanda ndokuzoenderera mberi achiti, “ko basa rakadii zvaro kuno nhai Ruth?”
“Kuno basa rakanaka zvaro uye hakuna chatichanetsa”. Akadaro Ruth achipindura shamwari yake.
“Ko ndechipi chikwata chakadarika?” Shanda akabvunza Ruth.
“Vana Tana ndivo vakadarika.” Akapindura Ruth achiratidza kufara zvichida nekuti akanga adoma zita rechibayamoyo chake.
“Ho-o. Anga anani iye Tana?” Akabvunza Shanda achida kunzwisisa.
“Aiva nemunin’ina wake Tsemu.”
“Ko chikwata chavo chakanga chakakura sei nhai?” Akubvunza zvakare Shanda.
“Chaiva navanhu vaikwana kuita ivo makumi mana.” Ruth akapindura achinyatsogara zvakanaka pachigaro.
“Mari yainge yakamira sei uye takapihwa mari isu tiri vaviri kudai?”, akabvunzurudza Shanda.
“Takapihwa mari inoita mazana manomwe emadhora.”
“Ho-o, izvo zvinofadza zvikuru kushanda nevanhu vakadai. Chikwata chaTana chinoshandika nacho ufunge zvako. Ndingangoti Tana anoshandika naye.”
Vose vakamboti bvu kuseka, Shanda ndokuzoenderera mberi achiti, “Ska titi uyu mazana matatu nechidimbu chamadhora. Izvi zvinoreva kuti zvinhu zviri kufamba ufunge zvako. Ini ndiri kuronga-ronga tsoro yemuchovha. Ndakatotenga injini yacho zvekuti mari yandatowana iyi ndiri kuronga kutenga bhodhi racho.” Akadaro Shanda aine kufara kukuru pahuso hwake.
“Nyangwe neniwo ndiri kutoronga: hausi kuona zvitinha zvesamende izvo nebhokisi remba ratopera iro.” Akadaro Ruth achinongedzera nemunwe.
“A-a ndambenge ndazviona here nhai Ruth, nyamba uri kuronga mashura akadai; ndiwo unonzi musoro manje uyu, kwete dzimwe shirikadzi dzinongoti mvukumvuku kugara zvanzi ndinodini ndingasimudzei ndirimunhukadzi kudai.” Akadaro Shanda.
Vapedza mashoko avo aya, vakasimuka ndokumbomema bhokisi remba yaRuth nezvimwewo zvavaitaridzana, vozopedzisira nekuronga rimwe zuva raaizouya narozve kwaRuth, vachizoona kuti kunenge kune chafamba ere. Chimwe chainyanyofadza Shanda ndechekuti akange asina zororo kusvika mukisimusi kubva mumwedzi wagumiguru uyu waaiva ari mauri. Aiti nechemumoyo, nyangwe dai vaizoshandurwa zvinzvimbo zvavo nekuchinjirwa kenedzimwe nzvimbo hazvisaizorwadza sezvo anenge amboronga. Ruth akabika kudya kwemasikati, akapakurirawo Shanda kudya kwacho kwaiva kwakasanganiswa zvekuti waitadza kuziva kudya uku kwaiva kwerudzii. Asi waigutsikana kuti kudya uku kwaifanira kuzipa zvikuru. Shanda apedza kudya akaoneka zvake, ndookumboperekedzana zvavo vachitsika matama enzira sevakadhakwa sezvo vaimanikidzana kuti vakwane vachikurukura zvavo nyaya dzavo. Ruth akafamba kanhanho kakati oo, ndokuzodzoka achironga zvekuvaka imba yake zvake. Asi nechekutsi kwemoyo wake aiti,”ko, kana zvatinoita izvi zvikazobuda pachena semanyanga asingaputirwi, chii chaizvo chichazoitika kwandiri? Ko kuna iyewo Shanda; asi Shanda anenge anotove nani zvake sezvo anogara kure uko. Anozotonzwa zviri kuno ndokunge atosvika kuno, zvekuti nyangwe tibatwe nemhosva iyi anogona kundisairira ndikademba.” Akadaro Ruth mupfungwa dzake akabva azvishingisa zvikuru mumoyo make achiti, “vakabudirira avo kuda kweushingi. Pasina ushingi hapana chingwa. Iwaya mahomucha anoyambutsa vanhu nemusango anditi ibasa guru rinotyisa nekuuraya. Vanoyambuka Limpopo azere nemvura vachipukunyuka pamakarwe. Vachifamba nemusango mumapark mumikanwa yemapere mune Shumba dzinorura dzinokara nyama yavanhu samara, anditi kuzama noto. Ivo vachitonotawo zveshuwa. Anditi vamwe vacho vakatotenga zvigayo, mota nemazienda nakuenda edzimba. Ndinototi ndishingewo; ndiyani angade kusarira kumashure semuswe paupenyu.” ndiRuth uyu ave kudzoka kubva kunoperekedza Shanda akazoerekana atopfuura pagedhi remusha wake nekuda kwepfungwa dzake dzakange dzamumomotera nekumutenderedza sezvo nzira yaaibva nayo yaipfuura nechekunze kwemusha kwemusha wake. Akabva adzoka zvishoma ndokupinda pamusha pake pfungwa dzake dzamboti sererei zvishoma. Asi pfungwa dzake idzi hadzina kuperera ipapo. Akabva ati, “regai ndimbopenengura mapepa angu ndione kuti tine zvikwata zvingani zviri kutibhadhara mari. Mirai ndione kuti zvakamira sei. He-e, chegore rino hameno.” Akatarisa-tarisa ndokuona zvikwata zvaikwana kuita gumi nezvishanu. Zvikwata izvi zvaivawo nemahomucha azvowo aiti; Maita, Marata, Keudha, Mukonde, Simange, Daula, Chikara, Tachena, Tauya, Gumai, Taguma, Todii, Mutanu, Izai na Endai. Ose mahomucha aya aibhadhara mari kunaTana namai Tazwa pamwe chete naShanda kunyange asipo.
“A-a, Mwari woye dai matitungamirirawo tiregobatwa pamwe tingabudawo nepapo zvinoita vana vevamwe. Uye ndinozvirumbidza. Ndaita zvakanaka handina kunyatsomuudza zvose zvandiri kuronga zvechitoro chandakavhura kwaChecheche Growth Point haazvizivi. Vazhinji vanoziva kuti mukoma wangu akatenga mota izvo ndini zvangu.” Idzi ndidzo pfungwa dzakamushungurudzazve kwepiri apo abva kuperekedza Shanda, dzikabva dzozopembenuka hadzo.
Upenyu hwakanga hwavava kudarika zvinhu zvose zvinovava pano pasi. Kurwadza kweupenyu muvanhu kunouya nenzira dzakasiyana-siyana panyika pano. Ndakasimudza maziso angu ndiri pasi pezimuti remuuyu apo taive takavanda tiri vanhu vana, kusanganisira muzukuru wangu Zekia. Maziso angu akanga ava kuona nyika yandisina kumboona pakurarama kwangu kwese. Zvino takanga tava pamusi wechitatu mangwanani kusina munhu auya kuzotitora musango mataiva umu. Kana tava kutaura nezvenzara zvose zvatakaona kuVhenda kwaiva kutamba chaiko. Tiri kuZimbabwe zvaive nane sezvo taitombonzwa munuhwi wenyika yedu. Ndiri kureva tiri kuya kuzvikoma zvekuVhenda. Takanga takadya sadza ari masikati esvondo, kusvika pazuva iri taifanira kunge tadya kunokwana katanhatu kana techiverenga masikati nemanheru. Asi waide kurionepi sadza racho musango makadai. Tana naTsemu yakanga yave kwakaenda imbwa ndiko kwakaenda tsuro. Pachedu takanga tatozviona kuti hakuna achauya kuzotitora kuti tiende paeGoli.
Zvandakaona ini Forayi panzira yeJoni handifi ndakazvikanganwa muupenyu. Panyika pano ndakanga ndisati ndamboona munhu akashinga semuzukuru wangu Zekia. Kubva manheru emusi wechipiri, Zekia aipota achindoba mvura pane rimwe purazi mumatonga amabhiza, umo maionekwa mvura zhinji yapihwa mabhiza aya. Purazi iri ndiro riya ratakada kuonekwa nemurungu uya tikazomuvanda. Taivanda kuzvikomo zvaive nechekumaodzanyemba kwepurazi iri. Purazi raiva nechekuchamhembe kubva kwataivanda kuenda kupurazi iri paiva nerwizi. Panguva iyi rwaiva rwusina mvura. Ndirwo rwizi rwuya rwatakachera fuku tikanwa mvura yaiva nemunhuwi wandichiri kunzwa kunhuhwa nanhasi uno mufunge zvenyu. Zekia aidarika fenzi yaiva yakafenzera matonga aya achindoba mvura aine chigumbura chine marita maviri. Aitigovera mvura iyi, uyu kadonhwe uyu kadonhwe. Taiswera masikati ose takati nemanhede gaa, takatarisa mudenga. Dai asiri Zekia, kutaura kudai chokwadi muchiitiko icho dai chakandiuraya. Zekia semunhu aiva mupangami akati kwatiri, “garai makavanda sezvo hatifaniri kuonekwa kana nani zvake kunyangwe shiri chaiyo.”
Apedza kutaura mashoko aya akasimuka kubva apotaivanda, akatanga kufamba-famba achisimudza mabwe achitarisa kuseri nekuseri kwawo. Takazoona ouya neibwe raive nekakomba nechepakati paro. Akatora machisi ndokukwenya, obatidza huni dzaive muchoto chaainge agadzirira. Akagadza ibwe riya pachoto, apedza kudaro akauya pasi pezimuuyu riya rataiva takavanda ndokutanga kutanha mashizha emuuyu uyu. Akaatswanya-tswanya ndokuaisa paibwe riya raaiva agadza pachoto ichi. Akabika mashizha aya, aibva ndookuabura otakura ibwe riya ndokuuya naro apotaiva ndokuti kwatiri, “varume, ngatidye mashizha aya pamwe tingatodzora moyo onai tafa nenzara.” Takadya mashizha aya nyangwe zvazvo aia asina munyu taingodya zvakadaro. Maziso edu akanga agara mumakomba, chekuita takanga tisisazivi. Zano rose rakanga radyiwa nembwa.
“Sekuru ndafunga kuti ndikokorodze chikwata chose timire mumugwagwa tisungwe nemapurisa. Murikuzviona sei sekuru?” Akadaro Zekia.
“Apa uri kutaura chokwadi muzukuru pamwe tingararama. Tana wacho nemunin’ina wake pamwe nemukadzi wavo mai Tazwa zvechida vatova pamwe soo. Isu techiyaura kudai.” Ndakapindura ini Forayi. Tose ndokunyarara tichinyatsogaya pfungwa idzi kuti pamwe dzaizotibatsira. Zviya zvekudemba nhamo yomumwe ndokunge zvinhu zvichakanaka kwete zvinhu zvaita mhidigori makumbo mudenga musoro pasi. Kuva netariro kunge newewo uchiona tariro mberi kwako kwete uchiona rima rakati mberi kwako mone. Nyangwe zvazvo samba ndisisina, pazuva iri dai ndakaona Tana ndaizofira paari. Ndaizomuruma pahuro nemazino sezviya zvinoita Shumba musango paya painourayamhuka musanga. Idzi ndidzo dzaiva pfungwa dzangu asi zvakanga zvisisabatsiri sezvo upenyu watakanga tatarisana nahow hwakanga hwava zvionere mbereko yegudo.
Nguva dzakanga dzonanaira paina nenhatu, tiri pamusi iwoyo wechitatu unova ndiwo musi watakadya mashizha emuuyu. Zekia asati asimuka kundotsvaga vamwe vedu muzvikwenzi zakasiyana-siyana uko vaiva valavandawo kuti tisangane tiruke zano rekuti tindomira mumugwagwa tisungwe, ari mazano ekutsvaga kurarama pane zvatakanga tatarisana nazvo. Nenguva shoma-shoma takanzwa kutinhira kwendege yerudzi rwechikopokopo. Chokwadi kunze kwakanga kwaipa. Ndege iyi yaiva yemapurisa. Kumugwagwa kuya mota yamapurisa yakanga yatomira iri yerudzi rweVan. Mamwe mapurisa akanga atopinda muzvikwenzi nechekare nembwa dzavo idzo dzaibata hwema kutsvaga isusu. Ndige iri mudenga ichivheneka kuti iratidze mapurisa varipasi pakanga pane vanhu. Handina kuzomboziva kuti vamwe vangu vaitizira nechekupi kwacho. Kunyangwe muzukuru wangu Zekia handina kuzombomuona kwaakafamba nako. Hakuna akazomboti zvatairongazve zvekuzvisungisa zvino tava kutizeizve izvo vasungi vataichema vakanga vauya vega. Kutaura chokwadi hapana akanga achada kusungwa. Ndakakambaira ndechidzika kubva pataiva takavanda ndechidzika murwizi rwuya rwunebhiriji kumugwagwa kuya kwatakapfuura nako. Ndakasvika mujecha rerwizi irwu sezvo rwakanga rwusina mvura panguva iyi. Kutaura chokwadi zvinhu zvakanga zvaita manyama amire nehari. Ndakaona pakambocherwa fuku ndikabva ndapinda mufuku umu ndokutanga kuzvifusira nejecha kubva mumakumbo kusvikira muhuro. Asi zvandaidai kana ndaizoshaya aizondiona kuti andifukunure chii chaizoitika kwandiri? Hama woye kuti nditi ndaiva ndichiri mupenyu here zvkazvishaya. Kutaura chokwadi panyama ndakanga ndafa, pamweya chete ndipo pakanga pachazwa , asi pangosara katambo kadiki-diki kuti kadambuke ndibve ndangonyarara zvachose.
Nechekuzasi kwerwizi ndakazwa izwi raiti,how how,how how,’uku kwaiva kuhukura kwembwa. ‘Oop trek’.Ndakabva ndaziva kuti ,uyu waiva mutauro wechibhunu,kuri kudaidza imbwa yainzi Oop trek.uyewo kuti Oop trek zvinoreva kuti dhonza kana kuti kweva.Ndichiri kunzwa inzwi iri ndakabva ndanzi dzvi nechemuhuro mangu kubatwa nerino zimbwa iro raikarodarika dhongi kukura kwaro. Rakada kundikwevera kunze ndokubva ndarambira mujecha umu. Nenguva isipi, zimubhurakwacha raiva nembwa iyi rakasvika ndokutanga kuchera rechindikwevera kunze uku zimbwa riya rakandikakatawo. Mushure mechinguva rakanditi vhomo kundibudisa ndiye kwakadoro tsve. Ririmi rwangu zvino kunze kasva. Ndaingoona sendiri kurota pane zvose zvaiitika izvi. Zimubhurakwacha riya ndokundisimudza rondimisa, pakarepo ndechibva ndaruma jecha nemuromo. Akabva aona kuti hakuna kwandaizosvika akabva abata chiovhaovha chake ochisimudza mudenga ndokuti, “00333222 ovha,..please bring the helicopter quickly to the south east along the sand river.” Nenguva isipi, chikopokopo chaitenderera mudenga chechiratidza mapurisa chakabva chamhara mujecha umu, asi chisina kutsika pasi asi chimire nechemumhepo. Ndakabva ndakwidzwa machiri, chakasimuka ndokunanga kumugwagwa kuya kwaiva kumire Van yemapurisa. Vamwe vangu vakange vatove mumota iyi nechekare sezvo ndini ndega ndakanga ndasara musango. Mota zvino yakanga yachiti shutu kuzara asi chakandishamisa ndechekuti hapana kana ani zvake andakaziva kunze kwekuziva kuti ichi ndicho chikwata change. Kunyangwe muzukuru wangu Zekia handina kuzombomuziva. Mota yakasimuka ndege yakanga yatoenda nechekare yakananga kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva. Mubhurakwacha uya wembwa akanga ava nevamwe vake kumugwagwa uku. Zvino kunze kwakanga kwasviba kuine rima. Mota zvino yakange yatosimuka. Nenguva yendisina kuziva, ndakaona ndakaona mota yave kutopinda mugedhi. Maziso ayo akarova pamudhuri ndikaona pakanyorwa kunzi Louise Prichards Prison. Mota yakamira payaifanira kumira tose tikabuda ndokumiswa mumutsetse ini ndiri wekupedzisira. Takabvunzwa mazita achinyorwa pamwe chete nechika yataibva, zvichinyorwa mubhuku hombe hombe. Zvishoma nezvishoma, ndakaita sendinoda kucheuka ziso rangu rakaba zvaiva kumashure kwangu ndokuona hofori, rini didinini rerume raiva rakabata pfuti iyo yaiva yakatarisana nemusana wangu zvikandiwedzera kutya. Zvekunyorwa zvapera takabva tagariswa pasi tikapiwa bota tikanzi tidye. Kumedza kwakatinetsa sezvo zvimedzo zvedu zvakanga zvave kutovhara nekuda kwenzara. Kunyangwe zvazvo ini nevamwe vangu vatatu tainge tambodya mashizha emuuyu, hazvina zvazvakabatsiara. Rimwe zigadzi rechibhunu rakati kakanya kakanya kufamba rechiswedera pedyo nesu ndokubva rati nerirumi rwechingezi, “who can speak English between you animals?” Tose takaramba takati kwaka kunyarara. Mufunge zvenyu izvi zvakandirwadza kupfuura usungwa hwataiva uhu, asi samba redu raiva shoma sezvo nyika iyi panguva iyoyi yakanga isati yasununguka riri gore ra1991. Zigadzi riya rakafamba-famba zvakare pamberi pedu ndokumira pemberi pangu ndokuona handisi kudya. Nzvimbo yacho yaiva masikati chaiwo. Hakusaiva kujeka kwemagetsi ikoko. Rakabva rati kwandiri nechirungu,
“Why are you not eating porridge guy?”
Zvino ndakabva ndarovera moyo padombo ndokubva ndati, “we have so many days wondering in the forest without food, so our throats are nearly closed.” Ndakadaro ndakamirira chikwata chedu. Zigadzi riya rakabva rati, “Hooo.”
Rakadana mumwe murume aiva mune imwe hofisi vakataurirana zvatisainzwa. Nenguva isipi, ndakazoona murume uya ave kuuya nekomichi huru yaive nemvura mukati. Akachera mvura iya achipa mumwe namumwe wedu tichimwa. Iyi yaive mvura yaive nemunyu wakawanda kuitira kuti pahuro pedu pazaruke. Tapedza kumwa mvura iyi, ndakugona kuti bota ridzike. Tapedza zvekudya izvi, chitokisi chakazarurwa, tikapitipidzwamo, ndiye gonhi dwa kiyi geje kukiya. Pakati pedu hapana kana ani zvake akamboti vanhuwoye ichi chii chiri kuitika kwatiri. Mumwe nemumwe wedu aiti nechemoyo make, zvazvadai tararama sezvo moyo yedu yakanga yachiti zvino saisai. Tikati takarara muchitokisi umu dzingave nhema nekuti kunze kwakabva kwati gwendere kuedza pfungwa dzechigaya nhamo dzeupenyu nechatakaitirwa vanhurume panyika pano.
Ndakatanga kupenengura zvose zvandakaona mukati mechitokisi umu,kunyange zvazvo takanga tisati tazarurirwa kana kuti mapurisa akanga asati auya kuzoona kuti tarara sei.Maiva mukati merima gobvu rakapetwa kanopfura kanomwe.Kupinda kwangu muchitokisi uku waiva upenyu wanguwekutanga kubva zvandakazvarwa.Kajira kandakapihwa hameno kuti chii chairuma machiri,ndakati inda here,itsikidzi here,zvino chingave chii?.Ndakabva ndashaya pazvo,imhosva yekuti hope hadzirindi wafa dai zuva iri ndisina kana kumbobiwa nehope.Pfungwa dzangu dzakaungana pamwe ndikashaya chokuita.
Pfungwa dzangu dzakadzokera kuchikomo kuye muzukuru wangu Zekia aindoba mvura mumatanga emabhiza papurazi remurungu riya.Ndikaonanazve achitanha mashizha emuti wemuuyu,ndechibva ndaona kushinga kwemukomana uyu neuchenjere wake.Ndakarangarirazve Tana nechikwata chake ndikaona kuipa kwemoyo yavo ndakavaenzanisa nengirozi dzasatan dziya dzakadzingwa kudenga.Pfungwa idzi dzakazopera pandakanzwa kuti chamboko chinorwadza,ndakashaya kuti vanhu ava vaiva vchikwata chedu here kana kuti ndevechimwe chikwatawo.Asi pfungwa dzangu dzaiziva kuti muchitokisi umu takapinzwamo musina kana munhu zvake,saka mashoko aya aitofanira kubva muchikwata chedu ichi.Taizoitwei kana kunze kwazoedza,asi ndaiziva kuti nhamo huru yaizovapo.Ndiri mupfungwa idzi pasuo rechitokisi rakazarurwa nemapurisa aichengeta chitokisi.Takaendeswa kune imwe imba iyo yaiva huru,takagariswa pasi tose.Takabvunzwa sei taiyambuka mugano zviri kunze kwemutemo.Ndakatsanangura nezvekuyambutswa kwedu navanaTana nekuzoraswa kwedu musango,chikonzero chedu chekuda basa.Nenguva isipi ndakazoona zimburukwachs riya rekundifukunura mujecha rakanditarisa ndokuuya pandaiva ndigere ndokunibata-bata musoro wangu,ndokubva rati ‘this guy is clever enough’.Rakadaro bhurukwacha riya rechindiyema semwana waro.
Zvapera izvi takaendeswa panzvimbo iya yatakaburitsirwa patakasvika.Mapurisa akauya pedu ndokumira-mira nokuzoti nemutauro weZulu, ‘hlala phanzi isikhathi siphelile’
Tose takabva tati nyaa kugara pasi.Takapihwa bota mupurisa uya zvakare ndokubva ati, ‘chopu-chopu isikhathi siyamba.’Takadya bota riya nekukurumidza sekutaurwa kwazvanga zvaitwa nemupurisa uyu.Zvekurohwa zviya zvandainyanyotya hazvina kuitika,moyo wangu wakanga wave kuti hameno kuchawira tsvimbo nedohwe,pamugano weZimbabwe neJoni.Mota yaizotitakura yakaya pagedhe rechitokisi mabharani ndokuuya akabata mapepa mumaoko ake.Ndakanzwa mazwi aiti ‘foughty people’.
Ndakabva ndaziva kuti chikwata chedu tichiripo tose,muzukuru wangu Zekia akabva agara pedyo pedyo neni nakangotarisana naye chete pasina shoko.Nguva yakasvika yekuti tisimuke,takatinhirwa muzirori riya,zirori rakafanana neriya rechingwa.Raiva risina kana fafutera zvayo kunze kwezvimaburi zvaiva nechekumusoro-soro kwaro uko.Rori rakasimuka ndokuruma mugwagwa ,panzvimbo yekuti rinange mugwagwa weLindela rakananga mugwagwa wekuBeit bridge.Hana yangu yaingoti tivu tivu kurova sezvo yakanga isingazivi chaizobuda muguru nembwa ukotaienda.
Zvino shoko rakanga rasvikawo munzeve ekukamba yeMasodzi raiti, nharire yavo Ruth akanga atova kuitawo bhizimisi rekuyambutsa vanhu mugano achibatsirana naTana. Runyerekupe rwakapindazve munzeve dzavo rwunoti, mupurisa uya aipota achienda kwaRuth kuVhenda akanga ava kufungidzirwa kuti atopindawo muudyire. Mapurisa aya aitoia zvekufungidzira zvavo izvo mupurisa uyu ainge atori muchikwata chimwe nanaTana. Zvaidaro nekuti Tana abhadhara mari kuna Ruth yaiva pakati napakati peyavanenge vaona. Ruth aizopawo mupurisa uyu nechepakati pemari iyi zvakare. Kwakatumwa mapurisa maviri kubva kukamba huru yemapurisa kuenda kwaRuth. Mapurisa aya akasvikoona Tana naTsemu varipo. Vakagashirwa naRuth zvakanakawo ndokupihwa pekugara. Vakakwazisana zvavo zvakanaka nekubvunzana upenyu zvisina gakava. Mushure mezvo mumwe wavo ndokubvunza Ruth achiti, “Ko ava ndivanani vako?”
“Ava ndivana muramu vangu; kwavo kwakaroorwa mwana wemunin’ina wangu. Vanogara kuChikwalakwala ukpo.” Akadaro Ruth achipindura mupurisa uya aive amubvunza.
“Hoo: ko basa rakamirasei kuno kumugano?” Akabvinza mumwe mupurisa.
“Haiwa, kuno kwakanaka zvako. Mazuva ano hakuna anoyambutsa vanhu sezvo vayambutsi vazhinji vave kundiziva nekudaro varikutotya kusungwa.” Akadaro Ruth asina kuziva kuti akanga anyangira yaona. Kwakanga kwaiswa mumwe mukomana aiongorora kuti Ruth arikuzvifambisa sei achishanda muchivande. Mukomana uyu akanga atoudza mapurisa zvose kubudikidza nekuburitsa chimiro chavanaTana. Panguva iyi, mapurisa aya akanga ava kutoziva kuti Tana ndeupi uye Tsemu ndeupi. Nenguva isipi, mapurisa aya akakumbira maoko avaviri ava kuti avaise ngetani kana kuti cheni. Vananyakusungwa vakabvunza vachiti, “sei muchitisunga tisina mhosva yatapara”. Zvikanzi nemapurisa aya, “matowedzera mhosva, kubvunza mapurisa muri vasungwa muchandozvinzwira ikoko.” Akadaro mumwe wemapurisa aya. Ruth haana kuiswa ngetani asi akasungwawo pamwe chete nevamwe vake. Nenguva shoma, mapurisa aya akabva aridza runhare kubva munharembozha yavo yerudzi rweNokia 1200 vachida mota yamapurisa kuti ivatakure. Vaitya kuti pamwe vaizotizwa. Mapurisa akafonerwa akati akanga atosimudza mota kuuya. Vasati vasimuka vakakanda-kanda maziso apo nekoko ndokuona imba yezvitinha yakanga yatopera. Iri ndirowo zuva rakatakurwa vasungwa kubva kuLouise Prichards kuuya kumugano weJoni neZimbabwe. Hurumende inovenga zvikuru zvekuyambuka mugano zviri kunze kwemutemo sezvo vanhu vazhinji vakatotsakatikira musango vachiurawa zvikuru nezvikara zvesango zvakaita seshumba, nyati, nyoka pamwe chete nemagumhagumha vanova vanhu vaya vanouray vanhu musango kuti vaabire mari nezvinhu zvavo. Nenguva isipi mota yemapurisa iri yerudzi rwedefender yakabva yati pfacha kusvika. Vose ndokupinda mumota. Yakasimuka mota ndokubva yaruma mugwagwa yakananga kukamba huru yemapurisa panonzi paMasodzi.
Ndisingaoni kuti tainge tave papi nerori iro raive rakatitakura, ndakazoona ratomira pakamba yemapurisa epamugano weSouth Africa. Dzakanga dzave nguva dzegumi ari mangwanani emusi weChina. Nenguva isipi takanga tatoiswa mumaoko emapurisa ekuZimbabwe anoshanda pamwe chete nevanoona nezvekudaritswa kwezvinhu pamugano. Ndokubva tazoendeswa kumapurisa kunova ndiko kwaitongerwa vanenge vapara mhosva dzerudzi urwu. Takaiswa panzvimbo iya inonzi yevafakazi kana kuti zvapupu. Mushure mezvo ndakaita sendiri kurota, sezviya zvinoitika kana uchinge waona munhu panzvimbo yausingafungidziri. Zvaidai kubudikidza nekuti ndakanga ndaona vanhu vatatu vaiti Tana, Tsemu namai Tazwa. Kutaura chokwadi, izvi zvakandikanga mate mukanwa kuona manana akadai. Ndakashaya kuziva kuti vanhu ava vakanga vasungirwepi uye zvaitasei sezvo kwatakasungirwa ivo vakanga vasiko.
Hama ndakadzamisa ndadzamisazve, zvekuti kudai vanhu vaidyanana, kutaura chokwadi Tana ndaizomumedza ndisina kumutsenga. Idi ndaizomusvada akadaro. Muchikwata chedu ichi taibvunzana nechemumoyo kuti, “Uyu ndiyani, uye munomuonawo here? Handiro here zimuroyi riya rakatirasa musango?”
Asi panguva iyi, tose takanga tatoziva zvedu kuti tararama pane zvatakanga tiri nezvatakaona sezvo zvinhu zvizhinji zvakanga zvashanduka pane zvazvaiva. Zvino takange tave kunzwana pamutauro nemapurisa enyika yedu yeZimbabwe. Takanga tava nehwema hwekanyi nekuti mabhazi aipduura nekumaraini kwedu takange tave kumaona achitokwidza vanhu nezvinhu kune avo vaibva kuJoni zvakanaka kwete zvedu izvi. Takarumbidza Mwari wedu sezvo tose takanga tiripo; hapana akanga arasika kana kufa. Masikati ezuva iri akasvika pasina kana ambotiudza asi iwo mapurisa raingova besanwa zvavo pachavo mapepa ebasa akabatirwa mumaoko. Mune mamwe mahofisi tainzwa chimuchini chiya chainyora manzwi pamazuva iwayo chichiti, “tatata, tatata” kuri kunyora basa ravo mumapepa. Mamwe mapurisa ndivo vaiitirana zvavo jee vachiseka vachiti, “avo ndivo vaya vekuzama notoka vachitiza nyika yavo; vanoti inogarwa nani?” Vaidaro zvavo iro basa richiitwa.
Nguva dzeposhi masikati dzakasvika sadza rakabikwa ndokupihwa tese kusanganasira nevamwewo vasungwa vaisungirwa dzavowo. Zvekudya zvapera, takabva tatarisira zvekutongwa kwenyaya yedu asi hazvina kutikurumidzira sekufunga kwataiita. Mushure menguva asipi, kwakauya mumwe mupurisa, rino zirume iro rakayamwa mukaka wamai waro rikaguta. Kumeso kwaro kuri kurefu, riine matama akafuta, nzeve dzaro dzakamira nesoro kuti twii. Dumbu raro riri kuno nekoko kukura. Makumbo achirova mumabvi kana ave kufamba. Bhande rebhurugwa rakanzi nechemudumbu shwe kusungwa. Maoko ari matanda chaiwo uku ngowani yechipurisa yakanzi nechepadera pesoro dzi zvekuti waiti ukamuona mupurisa uyu waibva wagutsikana kuti apa pane mupurisa zvechokwadi. Mupurisa uyu akabva amira nemumwe mupurisa aiva nenyembe yeuSargent. Zvavaitaururana handina kuzvinzwa asi ndakazoona Sargent uya atosvika pataiva achiti, “imi vekudarika mugano zviri kunze kwemutemo, nyaya yenyu haitongwi nhasi asi mangwana. Imi varume vaRuth muchatongwa pamwe chete nevanhu ava.” Akadaro Sargent uyu. Vatatu ava vakabva vapinzwa muchitokisi. Muchitokisi ichi, pfungwa dzedu dzaiti mapurisa aya anozviziva here kuti vanhu ava ndivo vakatirasa musango munyika yeJoni. Moyo yedu yaiti, dai pakutongwa vaizopuwa mutongo wakati kurei kuti varwadziwe vazosiya moyo weutsinye wakadai. Nenguva dzisingamiri, kunze kwakabva kwadoka. Takapiwa kudya kwemanheru pamwe nekuzogadzirira zvekurara techimirira remangwana racho.
Zuva rakanga rati kwirei zvishoma kusvika panguva dziya dzinotangwa basa nevanhu vazhinji. Takanga takatarisira kuti chii chaizotora nzvimbo maringe nemhosva yedu yatainge takamirira kuti itongwe. Mapepa ose akanga atoperera kugadzirwa, ayo aibatanidza ekuwerifeya neekubazi rinoona nezvekuyambuswa kwevanhu pamwe nezvinhu, rakabatana nere United Nations For Refugee High Commission nekuti tainge tootorwa sevapoteri nekune rimwe divi. Asi pamazuva edu aya, mapazi aya akanga asingabhadhari mari dzekutakurisa vanhu ava sesu.
Nenguva isipi, tose takatinhwa semombe dziri kumafuro techipinzwa muhifisi iyo yaiva hombe zvikuru. Zvino takanga tapinda munguva yakaoma kufanana neiya yekusungwa kwedu tiri kuJoni. Zvaizoti siyanei zvazvo pakuti pamutauro nemapurisa ekwedu takanga tava kuwirirana. Mukuru wemapurisa uyo aive nenyembe dzaiyerera akatanga kubata-bata mapepa ayo aive patafura nemamwe mabhuku awo ainge akazadzatafura yake. Akambotarisa kwatiri ndokumbokosora-kosora. Tose takabva taziva kuti nyaya iya yatanga. Mukuru uya ndokubva ati, “Ya-a, imimi”, akambokwenya-kwenya musoro wake nechigunwe chake chepakati kana kuti chiya chetatu kubva kumativi ose eruoko. Musoro wake uyo wairatidza kuti uchabuda mhanza munguva pfupi yaitevera. Akabva adzorera ngowani yake mumusoro sezvo akanga ambotsveta patafura, ndokuzoenderera mberi achiti, “ndati imi zvakafambasei kuti muzisungiwa kuJoni, uye maidei ikoko?”
“Taida basa.” Tose takadavira.
“Kotsvaga basa. Muri kureva ere kuti mose muri makumi mana kudaizvi maiva musina mabasa amaishanda muno here muZimbabwe?”
“Taiva nawo.” Ndakadairira chikwata chedu ini Forayi.
“Waishanda basa rei iwe? Akandibvunza achindinongedza nemunwe wake.
“Ndaishanda samabharani pakambani inorima tea kuChipinge.” Ndakapindura
“Vanhu vazhinji muri kurasa chiri mumaoko nekuda chekunzwa nenzeve. Manje makandoonei ikoko?”
“Ini ndakandoona chitsvuku,….ndakasiiwa muzienda-nakuenda wesango kusvika kusvika pakuzosungwa kwedu.” Uyu ndiZekia muzukuru wangu aipindura.
“Ya-a, pano kuti tinyatsowirirana uye kuti mutongo wenyu wamuchapiwa urerutswe, nyatsotsetsenurai rungano rwakazara rwuchatibatsira kuti tibate ava vanotyora mutemo vachidaritsa vanhu mugano zviri kunze kwemutemo. E-ee, pindura tinzwe iwe”. Akanongedza ini zvakare. Hana yangu yakabva yati tivu kurova, ndokubva ndarovera moyo padombo ndechiti, “Munhu akatiyambutsa mugano anonzi Tana nemunin’ina wake Tsemu pamwe chete nemudzimai wake anonzi mai Tazwa. Vanhu ava nezuro ndakavaona pano vachinge vasungwawo sesu. Takasimukira muTongogara refugee camp ndokuburukira paChomunanga bus stop paye panjanji. Tichibva ipapo takendeswa kuVhenda tikandovandoswa kuzvikomo zvizere nemiti yemuuyu.” Ndakadaro.
“Ho-o, saka maibhadhariswa marii pamunhu ega ega?” Akadaro achinongedza mumwewo kuti apindure. Akanongedzwa wacho ndeuya mukomana wekubatwa nehakata achinzi aive nemadhimoni akatitadzisa kufamba zvakanaka.
“Taibhadhariswa mazana mana emadhora pamunhu ega ega.” Akadaro mukomana uyu. Mupurisa uya akabva abata-bata mapepa ake ndokunyora-nyora zvaitaurwa izvi. Nenguva isipi, takazoona mumwe mupurisa ave kuuya naTana NaTsemu pamwe chete namaiTazwa. Varume vaviri ava vakanga vakasungwa ngetani mumaoko avo. Vakagariswa pasi ndokubviswa ngetani dziya. Paiva nemapurisa maviri aiva nepfuti pahofisi iyi kuchengeta isu. Mupurisa aitonga asati aenderera mberi nenyaya yake akambozvirova-rova nechinyoreso chake mumusoro wake achifunga matangiro enyaya. Takazonzwa oti, “Imi varume vaviri vanoti Tana naTsemu munopihwa mhosva yekudaritsa vanhu mugano zviri kunze kwemutemo muchivaendesa kuJoni; muchivabira mari inoita chuuru chimwe nemazana matanhatu emadhora. Mushure mekuvabira mari dzavo, munovarasa musango zvakare muchishanda neziso remapurisa kuVhenda uko, Ruth uyo agree apo. Munobvumirana nazvo here?”
“Chokwadi mukulu wangu handilambi ndava heyi; kuda kujawo lalamo nenoto. Ndalamo yashata changamile.” Akadaira Tana nerurimi rwechirudzi chake chechidanda.
“Iwe Tana naTsemu muchashanda kana kuti muchapika kwemwedzi inoita gumi nemiviri, asi tichamubvisira mwedzi miviri. Saka muchashanda mwedzi gumi. Iwewe Shanda newe Ruth, nyaya yenyu irikuenda kuCourt pazuva ramuchaziviswa. Sevashandi vehurumende nyaya yenyu inokosha. Sezvamunoziva kuti kushandira hurumende kunokosha. Akambonyora-nyora mapepa aiva patafura yake ndokuzoti, “imimi mose’, zvino akanga atarisana nesu, isuwo takanga tachiti kwaka kunyarara setapotswa nemheni, “muchafamba netsoka kuenda kwenyu kuChipinge. Werifeya nebazi rinoona nezvevapoteri pamwe nerinoona nezvekuyambutswa kwevanhu pamwe chete nezvinhu harina mari. Muchatoedzawo nhambutambu pachenyu. Vazhinji venyu makasiya mabasa amaishanda, parizvino mabasa enyu akatopiwa vamwe nekuti zvinonzi kufa kwemujoni kambani haivharwi.” Akapedzisira achidaro mukuru uyu. Ndakabva ndarangarira kukudzwa kwandaiva nako pakambani ndokubva ndaona kuti chokwadi uku ndiko kunonzi Kurasa Chiri Mumaoko.
Holy Tiara By GOD’S Lightangels Now
Available on www.Shakespir.com/books/view/615735
And On www.Shakespir.com/profile/view/angelsconnect
Madoda Madzaya Dube
Gwaro rino rinowanikwazve
Mamwe magwaro akanyorwa anoti;
1 Nhowo YeRuwadzano
2 Mhango YeHuchi
Published: 2016-05-04 21:35:07